I-PP Spunbond yeeNdwangu ezingalukiweyo zabavelisi kunye nabaxhasi | URayson
Uluhlu olwaneleyo lomgangatho ofanelekileyoPP spun-bond non-ephothiweyo ilaphu ibonelelwa yinkampani yeRayson ngobukhulu obahlukeneyo kunye nobukhulu. Siqabe niche njengenye yezona zinto zibalaseleyo zabavelisi belaphu e-PP esongelwe-nge-bond e-China. Sisebenzisa izinto ekumgangatho ophezulu ezikrwada kunye neendlela zakutshanje zokwenza PP ilaphu ephothiweyo. Le PP non-ephothiweyo ilaphu ngumxube ogqibeleleyo ukuzinza ngokungathandabuzekiyo, ukuthamba, kunye namandla elungileyo.
I-Polypropylene Spnbond ilaphu le-pockep yepokotho yentwasahlobo
I-PP Sp.bund ifatric idlala i-polypropric spic sup-bondlic fatric, amandla amahle kunye ne-elongwation. Yinto efanelekileyo yepokotho yepokotho. Ubunzima belaphu buvela kwi-60gr ukuya kwi-80gr ngobubanzi ngokwezifiso. Ilaphu elingeluki elilukiweyo libonelela ngeyona nto ilungileyo ye-PP Spnbond ye-PP, wamkelekile ukunxibelelana nathi.
Ukukhuphela ilaphu elibilikisiweyo
I-emboss ilaphu elilukiweyo.Iyoluhlobo lumbini. Zimbini ii-PC ze-PCS zinee-cotton .Other zii-PC ezintathu ze-PCSOVON.
Eyona nto ilungileyo ye-pp scnbond ilaphu le-matred yexabiso lefektri ye-matress -
Eyona nto ilungileyo ye-pp scnbond ilaphu le-stockert yexabiso lefektri ye-matress -.Singumenzi we-PP Sp.bund ye-nonlopric fatric eneminyaka eli-14 ubudala. I-ISO, bv& Izatifikethi ezifunyenweyo. Kwaye sibonelela nge-PP spnbox ilaphu le-nonlovel ilaphu leImveliso yethu yamkele iPolyproplene njengezixhobo ezibukhali, ngokuguqula amaqondo obushushu anyibilikayo, i-silk itshiza kwi-Nets, kwaye ishushu, emva koko yangqengqa, ekugqibeleni yangqengqa.Umgangatho weemveliso zethu uqinisekisiwe kwaye ukuhanjiswa lixesha ngexesha. Iimveliso eziphambili: Ifenitshala i-nonlove / ezenza ibhegi ye-nonloven ilaphu / ukhuseleko lokukhusela igadi kunye negadi / igadi yokufumana igadi / yezonyango.
Umgangatho ophezulu wePolyproptlene ongowalukiweyo ye-geotextane
I-Polypropylene engacandwanga Ngaba i-nonloven sprotextats ye-geondex eyenziwe nge-100% ye-Polyproplene swipper. Iindwangu ze-nonloven Polypropylene Geotextrane zisetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo ezikwiemarike zendalo esingqongileyo nakwiimarike zoluntu ngokubanzi, ezinje ngokwahlukeneyo kweProjekthi, ukhuseleko lwemidlalo, ukukhuselwa komhlaba kunye nokukhuselwa komhlaba.
Bonisa egumbini Rayson Non womluki Products
Foshan Rayson Non-ephothiweyo Co., Ltd. kuyinto ngumvelisi enongwe kwishishini non-ephothiweyo Ilaphu iminyaka yamava. It izibophelele uphando non-ephothiweyo ngelaphu, uphuhliso, kunye nemveliso kwaye imigca 10 advanced non-ephothiweyo ngelaphu imveliso, esikwaziyo ukuvelisa PP amalaphu non-ephothiweyo, SS ezingezo ephothiweyo ngelaphu, SMS, meltblown, inaliti punch kunye spunlace non yokwaluka ilaphu , kunye ukuvelisa uluhlu ubunzima ukusuka 10gsm ukuya 150gsm ngaphakathi ububanzi 4.2m, ngesixa yemveliso yonyaka onobunzima phezu 36,000 iitoni. Le nkampani iyakwazi ukuvelisa amalaphu non-zazenziwe imibala ezininzi ezahlukeneyo kunye nobukhulu, ifanele ukusetyenziswa ezininzi ezahlukeneyo.
I-PP scnbond engavenkini ye-geotextile
I-WhiteXXXXTEXX Ukusetyenziswa kumashishini okukhwela imihlaba ngalo lonke ixesha kwaye wenze uphawu ngokuzinzisa umhlaba, ukuphucula indawo yokuntywila kunye nokufihlakala, ukusasaza imithwalo. Le ilaphu le-geotextilextile ye-GeotextXle yenziwa nge-polyproplond spnbond engaveli, iqheleke ngombala omnyama nongwevu. Ilaphu le-biodeagodyarddised, elungeleleneyo ne-UCE kunye ne-UV.
Iimveliso eziphambili zenkampani yeRayson engaluki
UFoshan Rayson on-on-on-on-on-on-on-on-on-whd. Ibophelelekile kwilaphu elilukiweyo, uphuhliso, kunye nemveliso kwaye inemigca eli-10 ebalaseleyo yelaphu, ekwaziyo ukuvelisa i-PP engeyiyo ilaphu, i-SS, i-pingblown, i-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-punch punch kunye ne-spchlace ilaphu elilukiweyo , Kunye nokuvelisa ubungakanani bobunzima ukusuka kwi-10gsm ukuya kwi-150SM ngexesha lobubanzi be-4.2m, kunye nemveliso yonyaka enobunzima obungaphezu kwama-36,000,000 amathoni.
Isithuba sangaphambi kokunqunyulwa kwefanitshala
IRayson ngumzi-mveliso oqeqeshiweyo owenzi ilaphu elilukiweyo elingaphezulu kwe-14years.Isikithi sangaphambi kokunqunyulwa yenye yemveliso yethu esetyenziselwa ifanitshala, njengoMatrasi kunye nesofa. Umgca wokusika wangaphambi kwexesha wenza ukuba i-tight ngokulula. Ingaphucula ukusebenza ngempumelelo kwemveliso ye-furun. Ilaphu elingeluki elilukiweyo le fanitshala lithunyelwa ngaphandle kwintengiso yaseYurophu.
Ukuthunga ilaphu eliyiliphuli
Yokuthunga Non zazenziwe IlaphuIndwangu ye-beige fastric ilaphu isetyenziselwa isigqubuthelo se-matress esonwabisa i-matress efanelekileyo ngakumbi.Ubungakanani buyi-2.1m ukuya kwi-2.4m.Ihlala i-60gram ukuya kwi-100gramUBeige, ngwevu, umbala omnyama nomhlophe.
I-Stitch Fown PP Spnbond ilaphu elilukiweyo le-matress
Ilaphu le-Stitch-bond-boun-Hodnics, uhlobo olunye lwe-PP Spin Boctric, zenziwa kumatshini obomeleleyo ongena kwiwebhu, okanye i-Web I-PP SPUN ye-SPUNS ye-SPUNTICS ye-on-on-on-whouric isetyenziswa njengento yokufakelwa kwe-thermal okanye i-paking okanye njengesiseko ekwenzeni i-quilts, iingubo kunye neentyatyambo. I-Stittch Fown PP ye-PP engowalukiweyo yeyona nto iphambili ekwenzeni umatrasi. Isetyenziswa njengelaphu ezantsi kwematrasi. Ilaphu elingeluki kwi-70gr ukuya kwi-100gr kwimibala eyahlukeneyo. IRayson yeyona rayon yeyona nto ilungileyo ye-PP Spon-bol-bol-bol-bol-bovel ye-on-whoveric. Wamkelekile ukubuza.
Ilaphu elibi elibiweyo lebhokisi yeBhokisi yeNtlethi
Sigcine ingxaki xa ivelisa ipokotho yasentwasahlobo kukho ingxolo enkulu. I-petfoached ngendwangu ye-Dot Nounic ingagcina yonke ingxaki yengxolo xa ivelisa umatrasi, isofa kunye nenye ifanitshala. Ithambile kwaye iphefumle. Kwaye i-stenght kunye ne-exastion igcina kwinqanaba elifanelekileyo.
Ilaphu elinganyangekiyo lamanzi
Ilaphu elinganyangekiyo lamanzi.Isetyenziselwa iphepha lokulala kwezonyango kunye nezinto ezilahlekileyo, umzekelo iimaski zoqhawulo-mtshato, i-gown esebenzayo.Sinobungakanani obukhulu kubathengi bakhetha i-.nd nombala kunye negram.Hlala ubeka ebhegini okanye kwibhokisi.